बजेट तयारी : लेखनमा सक्रिय यी हुन् ६ अधिकारी
भागवत भट्टराई काठमाडौं, १० जेठ
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्नको लागि ४ दिनको मात्रै अवधि बाँकी रहँदा अर्थ मन्त्रालले बजेट लेखन कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई प्राथमिकता दिएर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सक्रिता बढाएका छन् ।
अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट 'कोर टिम'भित्र केन्द्रित गरिएको छ । कोर टिम आधिकारिक रूपमा ६ जनाको रहेको छ भने २ जना सल्लाहाकार १ जना सहयोगीका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. रामशरण खरेल पनि सक्रिय रहेका छन् ।
बजेट लेखन टिमको संयोजन सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले गरेका छन् । उनी अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख हुन् । सामान्यतया बजेट लेखको संयोजकको भूमिका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुखले गर्ने भएता पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपाललको संयोजकत्वको बजेट टिम खडा गरेका छन् ।
नेपालको संयोजकत्वमा रहेको टिमको सल्लहाकारको रूपमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी रहेका छन् ।
बजेट लेखन टिमका झक्कप्रसाद आचार्य, धनीराम शर्मा पौडेल, यज्ञप्रसाद ढुंगेल र यमलाल भुसाल रहेका छन् । त्यस्तै, बजेट लेखन कार्यमा सहयोगकीको रूपमा शाखा अधिकृत बालकृष्ण अधिकारीले काम गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
३ महिनाअघि मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यकालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएका यमलाल भुसाल आर्थिक नीति तथा विश्लेषण महाशाखाका प्रमुखका रूपमा रहेका छन् । त्यस्तै, बजेट लेखन टिममा रहेका ढंगेल राजस्व व्यवस्थाप महाशाखाको प्रमुखका रूपमा हरेका छन् । उनी यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागबाट अर्थ मन्त्रालयमा सारिएको थियो ।
ठूला करदाता कार्यालयमा रहेर पनि अघिल्लो बजेट लेखन कमिटीमा रहेका धनीराम शर्मा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख रहेका छन् । उनी बजेट लेखन टिमको सदस्यका रूपमा छन् । यसअघि उनी ठूला करदाता कार्यालयमा रहेका थिए ।
त्यस्तै, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख झक्कप्रसाद आचार्य पनि बजेट लेख टिमको सदस्य रहेका छन् । बजेट लेख कार्यक्रमा अर्थमन्त्री स्वयंले समेत प्रत्येक दिन मार्गनिर्देशन गरेको अर्थका अधिकारी बताउँछन् । टिममा नाम नभएर पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. रामशरण खरेल पनि निरन्तर बजेट लेखन टिमसँग बसेर काम गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री खचतिवडा भने अहिले पनि स्रोत व्यवस्थापनलाई नै केन्द्रित गरेर छलफलमा रहेको बताइएको छ । विश्‍व बैंकसँग लिइने तथा सहयाताका सवालमा अर्थ मन्त्रालयले टुंगो लगाए पनि एसियाली विकास बैंकलगायतका बहुपक्षीय निकायबाट बढाउन सक्ने ऋणका सवलामा अर्थमन्त्रीले अहिले पनि केन्द्रित देखिएका छन् ।
स्रोत खुम्चदै गएको अवस्थामा सरोकारवालाले सानो र कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउन सुझाब दिए पनि अर्थ मान्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको लागि सवा १६ खर्ब माथिको बजेट ल्याउने तयारीका साथ निमार्णमा रहेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ २ गते संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन मानेर बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले निर्माण गर्ने हो । बजेटको स्रोत न्यून भए पनि नीति तथा कार्यक्रमले अघि सारेका योजना बढी भएपछि अर्थमन्त्रीलाई चुनौती थपिएको छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १०, २०७७, १२:५७:००
सवारी पास लकडाउन अवधिभर मान्य हुने
यसै हप्तादेखि मलेसियाले अवैध रूपमा बसेका श्रमिकलाई घर फर्काउने